Ukujonga kuqala: UDell Inspiron Mini 10 (1018) -Geofumed
Ukujonga kuqala: Dell Inspiron Mini 10 (1018)
Agasti, 2011 Zobunjineli, Ukuprinta kokuqala
Ukuba ucinga ukuthenga iNetbook, mhlawumbi iDell mini 10 inokuba lukhetho. Ngexabiso lijikeleze i-US $ 400, ngaphantsi kwe-Acer Aspire One yasekuqaleni ekuqaleni. Ingaphezulu okanye incinci (ngaphantsi kwamanye) Omfunayo a Acer D255-2DQkk, ecacisa gca le nguqulo (1018) ayisekho kodwa entsha umnxeba Inspiron mini 10 (1012); ngokungafani ne-Acer ulwahlulo lwemifanekiso lukhulu kakhulu ukulahlekelwa isigwebo nangona abaninzi bengatshintshi umbala.
Phakathi kwezinto eziye zamkela ingqalelo:
I bhibhodi Kuhlala kubonakala ukuba amakhoba ayaqhubeka ukunika iingxaki kule, kodwa ndiyathanda ukuba ikhibhodi ayibandakanyi imisebenzi yezitshixo njengokhetho lokuqala. Kuthi emva kwexesha, kodwa ngenxa yokuba umntu othile egxile ekuvuleni ukuba kunqabile ukuba sisebenzise izitshixo ezinje ngeF5, F7, F11; endaweni yoko zibandakanyiwe ukuthumela kwiDatashow, ngaphandle kwamacingo, ukukhanya, ivolumu yeaudiyo, ngaphandle kokusebenzisa isitshixo seFn. Ukucwangciswa kwetolo lokuhambisa kulunge ngakumbi, njengoko siqhele ukwenziwa, kunye nokukhetha ukuqala, ukuphela, ukuLungisa kunye neAvpag ngesitshixo somsebenzi. Intengiso ye-Acer ibangela ukuba iliza liwele kuyo okanye amathontsi ambalwa evulekileyo, kodwa andicingi ukuba oko kuthetha ukuba ayinamanzi, mhlawumbi uyilo luyamelana nokufuma okusisiseko kulwandle oluphezulu okanye abantu abasebenza nabo abathetha i-Wild Cat; okwangoku ikhibhodi ibonakala ikhululeke ngakumbi kwindawo yokuchwetheza.
Uyilo Kulungile, ndiyathanda ukuba iirubber ezikhuselayo xa kuvalwa ziqinile kwaye zinde, kude neekona. Le yinto embi kuyilo lwe-Acer, ehlala ibangela ukuba balawulwe ngeminwe kwaye baphele bekhululekile, ngakumbi ukuba irabha imanzi ngenxa yobushushu.
I-Touchpad Inamaqhosha asezantsi, engenangqondo le Aspire One wayenayo xa yayilungiselelwe ecaleni. Kwinto entsha (1012), idityaniswe kwitafilethi enye, ngesiqabu esithambileyo.
Ibhetri, Eyona ilungileyo. Iza ichazwe kwangaphambili ngokokumiliselwa kukaDell, ke ihlala iyure enye, kodwa ukhetha ukhetho lokugcina, ukusebenza okucingelwayo kungaphezulu kweeyure eziyi-8.
Umthamo yanele, iphinda kabini i-Acer Aspire One.Ine-Intel Atom N455 processor, ene-1.66 Ghz kunye ne-2 GB ye-RAM. I-Intel 3150 yemizobo yokubonisa ebonakalayo iyinika ukomelela, nangona iya kuthi ngokuqinisekileyo ixhomeke kwiinkqubo ezinzima kakhulu, esele zinezixhobo zeDualCore ezincinci, kodwa ngokoluvo lwam le modeli yanele i-CAD / GIS, ukuba idityaniswe nesuphavayiza enkulu kwiiseshoni ezikhubekisayo emehlweni.
Ukugcina, izisa idiski enzima ye-250 GB, nangona malunga ne-20 GB ingafumaneki, kodwa ukubuyisela ulwahlulelwano ngayo nantoni na -okanye phantse-sifanele siyifomati kodwa siphinde sibuyisele ukubuyiselwa kwasekuqaleni.
Ngokukhetha, ikhadi lokumkela i-GPS elibizwa ngokuba yi-DELL Wireless 700 linokufakwa, apho i-GIS inokusetyenziselwa ukufaka idatha kunye nokuhlaziya. Kwakhona, ukuba baceliwe bangayithumela nge-Ubuntu, ebonakala ngathi yinto entle ye-DELL, nangona ingekabikho kum.
Kwinto endicinga ukuba akukho phuculo, yintambo ebonakala ngathi isemngciphekweni, ke phambi kokuba yonakaliswe ndiza kucofa isiphelo esidibanisa iNetbook. Ngethuba nje bengakwenzi ngee-90 degrees, kuya kubakho ukulahleka.
Ukuba kukho into endiyikhumbulayo ngendala, mhlawumbi iya kuba yeyomfundi wekhadi kuba yamkela ezintathu kuphela, endaweni yesi-5. Kananjalo olu hlobo luzisa kuphela izixhobo ezimbini ze-USB, endicinga ukuba zimbi; Kule nto kunzima ukuba wazi ukuba ezi ziimpawu zeMini 1012, kuba kwikhathalogu kubonakala ngathi inamazibuko amathathu kunye nenye yemakrofoni andiyiboni- kwaye andiyisebenzisi-. Eminye, ndicinga ukuba ndiza kuyifumana ekuhambeni kwexesha.
Okwangoku, ukufaka i-Chrome, uGoogle Earth, i-iTunes, uMbhali oBukhoma kunye ne-sync yeDropbox apho yonke enye into ikhoyo. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ... khumbula ngcebiso e fanayo, ukuba nangona le nxalenye enye, i-chorus iyafana ... yiNewbook, kungekhona i-Anvil.
Acer balangazelela IDell Mini umbono yam yokuqala
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iipilisi zeGIS zeJografi
Post Next Ngaba iJava kufanelekile ukuba ifundwe?Okulandelayo »
Impendulo enye kwi "Impembelelo yokuqala: Dell Inspiron Mini 10 (1018)"
Juan | design web uthi:
ngokubonakala kwencwadana, sinakho ukuthwala i-pc yethu ephathekayo kuyo yonke indawo kwaye njalo soloko unxibelelana kuyo nayiphi na indawo kuba kukho iindawo zoluntu ezinika inethiwekhi yeWIFI.